जुठा भाँडा माझेर शिक्षा कमाएका मोहन करोडको मालिक यसरी बने ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
जुठा भाँडा माझेर शिक्षा कमाएका मोहन करोडको मालिक यसरी बने !
मोहन कटुवाल, संस्थापक अध्यक्ष, ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल
मेहनत गर्नुपर्छ र इमान्दारिताका साथ जीवनमा अगाडि बढियो भने सफल भईन्छ भन्ने मान्यता बोकेका मोहन कटुवालको जन्म २०२३ भदौ २३ गते झापामा भएको हो । उनको बाल्यकाल साह्रै दुःखदायी थियो । दुःखको कुरा उनी ६ वर्षको हुँदा उनको आमाको निधन भयो । त्यससँगै उनका बुबा पनि बिरामी परे । एक जना भाई र एक बहिनीको स्याहार सुसार सहित जानेर वा नजानेरै ६ वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै उनले घर व्यवहारलाई सम्म्हाल्नुपर्यो । उनका बुबा एक प्रशिक्षण केन्द्रको सामान्य जागिरे थिए । त्यहि बुबाको जागीरबाट पढ्ने र घर व्यवहार धान्न सहयोग पुग्दथ्यो । तर बुबाको सामान्य जागीरले उनीहरुको घर चलाउन साह्रै मुश्किल थियो ।
अरुको घरमा जुठा भाँडा माझेर पढें
मैले बाल्यकालमा निकै संघर्ष गरें । पढाईकोक्रममा अन्य बिद्यार्थीहरुलाई ट्युसन पढाएं । पढ्नै पर्छ भनेपछि अरुको घरमा गाईबस्तु हेर्न पनि हिंडे । यतिसम्म कि कसैको घरमा खाना बनाईदिएर, जुठा भाँडा माझेर पढ्ने गर्दथें । म खाना बनाईदिएर स्कूल जान्थें । त्यो घरका मानिसले खाना खाएर बाहिरतिर कतै जाने गर्दथे । अनि स्कूलबाट फर्केपछि ती बिहानका सबै जुठा भाँडा माझेर खाना बनाउने लगायत घरको सबै काम सकिन्थ्यो । अनि रात साँझ गरेर दुःखका साथ पढाइलाई अगाडि बढाउँथें ।
जागीरका लागि काठमाडौको यात्रा
स्कूले जीवन झापामै सक्काएपछि पाटन कलेज हुँदै आरआर क्याम्पसबाट बिए सम्मको अध्ययन सक्काएको छु । २०४२ सालमा झापाबाट एसएलसी सकेर जागीर खान भन्दै पहिलोपटक काठमाडौ आएको थिएं । त्यतिबेला सिन्धुपाल्चोकमा शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलेको छ भनेर काठमाडौसम्म आईपुगें तर पनि त्यस स्थानसम्म पुग्ने बाटो खराब छ, अप्ठ्यारो छ र पहिरो गईरहन्छ भन्ने सुनेपछि काठमाडौमा नै रोक्किएं ।
बिहान कलेज पढ्ने, दिउँसो ग्रीलको काम र बाथरुमको धारा बनाउथें
त्यसपछि पाटनमा ग्रील एवं स्टिल सम्बन्धी काम र बाथरुमका धाराहरु बनाउने सम्बन्धी काम सिकें । बिहान–बिहान कलेज पढ्दथें, दिउँसो ग्रीलको काम गर्दथें ।
काठमाडौ पुग्छु भन्ने कल्पनामै थिएन
हरेस खानुहुँदैन, मेहनतमा विश्वास गर्नुपर्छ, इमान्दारिता छोड्नुभएन, यसो गरियो भने लक्ष्य अवश्य नै प्राप्त हुन्छ भन्ने सँधै सोच्दथें । मैले काठमाडौसम्म आउने कल्पना पनि गरेको थिईन । म २०३८ सालमा सोच्दथें कि जीवनमा कुनैदिन काठमाडौ पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न ? मेरा साथीहरुले अझैपनि मलाई काठमाडौ जान पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने मानिस अहिले काठमाडौमा सम्पन्न भएर बसेको छन् भनेर जिस्याउँछन् ।
चाहेर पनि जीवनमा जागीर खान पाईन
म अहिले खुसी छु । काठमाडौ देख्छु कि देख्दिन भनेको ठाउँमा एउटा कर्म गरेर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छु । व्यवसायबाट सन्तुष्ट छु । जीवनमा जागीर खान पाईन भन्ने मनमा रहिरह्यो । मेरा साथीहरु मन्त्रालयका सहसचिवसम्म भईसकेका छन् । साथीहरुले जागीरभन्दा आफ्न्नो व्यवसाय गरेको ठिक छ भन्दा मलाई सुखी लाग्दछ । तर जागीर खान काठमाडौ आएको मानिसले ज्यालादारी काम त गरें । तापनि एउटा जागीर पनि खान नसक्दा भने सँधै खल्लो लाग्दछ ।
ग्रीलमा लागेको २५ वर्ष
अब २ वर्ष काम गर्छु भन्दा भन्दै अहिले करिब २५ वर्ष भयो ग्रीलमा काम गरेको पेशा परिवर्तन गरिएन । खुसी कहाँ छु भने मैले त्यस्ता मानिसलाई काम सिकाएं जो पढ्न पनि सकेनन्, कहिँपनि काम पाउँदैनथे । त्यस्ता मानिसहरु अहिले एक करोडभन्दा बढिको घरहरु बनाएर बसेका छन् । बच्चाहरु पढाएका छन् । उनीहरु जहिले पनि म सँग खुसी साट्छन् । त्यसमा म सबैभन्दा खुसी बन्छु । यो दौरानमा आफ्नो जीवन जति कष्टकर बनेपनि आफ्ना बच्चाहरुलाइ भने असल संस्कार र शिक्षा दिनुपर्ने रहेछ भन्ने सिकेको छु ।
जापानीज कुल्लीले सिकायो, काम गर्दा कुल्ली र बाहिर हिंड्दा बाबुसाहेव !
तीस वर्ष पहिले म जापानीजहसँग बस्दथें । म जापानीजलाई नेपाली सिकाउँथें भने जापानीजहरु मलाई जापानीज भाषा सिकाउँथे । त्यतिबेला जापानीजले गरेको कुल्ली काम र उनीहरुको मेहनत देखेर नै काम सानो ठूलो हुन्न रहेछ भन्ने लाग्दथ्यो । र काम गर्दा कुल्ली बन्नुपर्ने रहेछ, अरु बेला बाबुसाहेब बनेर हिंड्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि लाग्दथ्यो ।
छामेर आँखाबाट आँसु झार्दै वेल्डिङ गर्दथें र कलेज पढ्दथें
समयक्रमसँगै मेरो बुबा काठमाडौ, किर्तिपुरमा रिकाष्ट सर्भिसमा सरुवा हुनुभयो । किर्तिपुरमा एकजना रिकाष्टको ड्राइभर र मेरो बुबाले संयुक्तरुपमा एउटा कोठा भाडा तिरेर हामी बस्ने गर्दथ्यौं । म भने खाना बनाएर हिँडेर पाटन कलेज पढ्न आउँथें । कलेजको पढाइ सक्काएर दिनभर वेल्डिङको काम गर्दथें । तर दुःखको कुरा वेल्डिङ गर्दा आँखा रातो हुन्थ्यो । म छामेर आँसु झार्दै वेल्डिङ गर्न हिड्नेगर्थें ।
ढलान फोड्दा धेरैचोटी धुरुधुरु रोएको छु
त्यस्तै ढलान फोड्नुपर्ने हुन्थ्यो । ढलान फोड्दा छिनोले धेरैचोटी हातमा हिर्काएको छ । सुन्निएर हात धेरै ठूलो हुन्थ्यो । काम गर्दाखेरी मेरो भाग्य नै यस्तो भनेर चित्त बुझाउँथे । यसक्रममा म धेरैचोटी धुरुधुरु रोएको छु । घनले छिनामा हान्दा चिप्लेर हातमा लाग्दथ्यो । हातमा फोका फोका हुन्थ्यो । कैयौं पटक त्यस्तो भयो । तर के गर्ने आवश्यकताले काम गर्नै पर्दथ्यो ।
घन ठोकेर पढें
मैले घन ठोकेरै पढें । महिनाको १ सय पचास रुपैंया देखि काम गरें । ३५० रुपैंया तलब पुग्यो र आवेशमा आएर काम छोडे । त्यतिबेला बिरामी पर्दासमेत साहूले आफूलाई किन काममा नआएको भनेर तथानाम गाली गरेपछि अरुको काम छोडेर ग्रील व्यवसायतर्फ लागें । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट बाथरुमको धारा बनाउँदै ठेकेदारसँग ज्यालामा काम गर्दै पछि लागेको दिनलाई सम्झिएँ र अरुको प्रेरणासँगै व्यवसायलाई अगाडि बढाएँ ।
दुःख सँगै सहानुभूति पाएँ
काम गर्ने क्रममा काठमाडौ, बागबजारमा सेतेकाजी तन्डुकारलाई भेटें । उनले पढ्दै, काम गर्दै गरेको देखेपछि मलाई माया गरेर दुःख सँगै सहानुभूति र माया दिए । सेतेकाजी एक ठेकेदार थिए । उनले तिमीले काम गरेको रकम कटाएर म मेसिन दिन्छु व्यवसाय गर भनेपछि म व्यवसायको चक्करमा अगाडि बढें ।
५ सय ऋण सापट लिएर व्यवसाय सुरु गरें
सुरुमा ५ सय रुपैंया सापट लिएर ग्रील व्यवसाय सुरु गरेको हुँ । एक रुपैंया पनि पैतृक सम्पति प्रायोग गरेको छैन । त्यतिबेला तन्डुकारकोमा काम गरेर मेसिनको पैसा कटाएर ७० हजार रकम पनि हात पारें । र उनैको मेसिन लिएर २०४५ सालबाट व्यवसाय अगाडि बढाएँ । त्यतिखेर म कलेज पढ्दै थिएं । यता बुबाको सर्भिस पनि सक्कियो । बुबाले पनि उद्योगमा सहयोग गरिदिनुभयो । मैले हिम्मत हारिन । मेरो हातमा शिप थियो । ऋणसापटीसँगै व्यवसाय अगाडि बढाउँदै गएँ । भाँडा माझेर पढाई सुरु गरेको भएपनि निरन्तरको संघर्ष र मेहनतको फल म एक उद्यमी बन्न सकें जस्तो लाग्छ ।
सन्ततीलाई सम्पति भन्दा पनि शिक्षा र संस्कार
अहिले म बाट काम सिकेर ४ सय भन्दा बढि मानिस बाहिरिसकेका छन् । कतिले उद्योग खोलेका छन् । यसक्रममा मैले बिएसम्मको अध्ययन सक्काएँ । श्रीमती र बच्चा बच्चीलाई राम्रो शिक्षा र संस्कार सिकाएँ । छोरी पिएचडी गर्दैछिन्, छोरा चार्टड एकाउन्टेन्ट भए । सन्ततीलाई सम्पति भन्दापनि शिक्षा र संस्कार राम्रो दियो भने पछि उनीहरुलाई सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्दथ्यो । त्यहि हिसाबले पढाए ।
लाखौंको कारोबार गर्दछु
अहिले मैले वार्षिक ५० लाखभन्दा बढिको कारोबार गरिरहेको छु । विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेको छु । ८/१० वर्ष यता मेरो जिम्मेवारी पनि थपियो । म ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालको जिम्मेवारीमा छु । २०६२ साल जेठ दुई गते कोटेश्वरमा ग्रील इकाई समितिबाट संयोजकमा प्रवेश गरेसँगै ग्रील व्यवसायी संस्था नेपालको सचिव र त्यसको ६ महिना भित्रमै अध्यक्ष बनेर काम गरें । अहिले महासंघको संजाल ५४ जिल्लामा विस्तार भएको छ । २०० जना सदस्य बढेर ६ हजार नाघिसकेका छन् । म महासंघको संस्थापक अध्यक्ष हुँदै हाल कार्यरत नै छु ।
५०० सापटीबाट बाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले करोडमा !
म सँग घर, मोटर छ । मैले आफ्नो व्यवसायबाट धेरैलाई रोजगारी दिएर खुसी दिन सकें । धेरैले उन्नती गरेका छन् । सबैले घर बनाएका छन् । बच्चा बच्चीलाई शिक्षा दिएका छन् । धेरै व्यवसायीलाई ग्रील क्षेत्रका बारेमा सिकाएँ आफुले पनि अरुबाट धेरै सिकें । अहिले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको राजश्व समितिको सह सभापति, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको वस्तुगत उपाध्यक्ष, ग्रील महासंघ र विभिन्न सहकारीहरुमा आबद्ध छु ।
महत्वकाँक्षी व्यक्ति बन्ने होईन तर राम्रो काम गर्न महत्वकाँक्षी बनौं
अन्त्यमा सबैलाई शिप सिकेर लगनशील र इमान्दार ढंगले काम गरौं काममा सफल भईन्छ भन्न चाहन्छु । मेहनतमा विश्वास गरौं । महत्वकाँक्षी व्यक्ति बन्ने होईन तर राम्रो काम गर्न महत्वकाँक्षी बनौं भन्न चाहन्छु ।
(अर्थतन्त्रका लागि हरिशरण न्यौपानेसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मितिः २०७३ कार्तिक १०
बैँकको ऋण लिएर उम्कन खोज्नेलाई छोडिन्न : अन्तर्वार्ता
प्रमोदवावु तिवारी, निर्देशक, कृषिविकास बैँक, क्षेत्रीयकार्यालय, जनकपुर कृषि विकास बैँक लिमिटेड, दोलखा शाखामा आर्थिक तथा
दश वटा जहाज थपेर विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्छ : सीएन पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल एसोशियसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा) को आगामी १२ जनवरी २०१८
मलाई राजनितिमा लागेर पैसा कमाउनु छैनः हरिशरण लामिछाने
भक्तपुरको तत्कालिन छालिङमा वि.स २०२४ साल फागुन ११ गते पिता हरिप्रसाद र माता देवमाया लामिछानेको
नेपालको पर्यटनको आधार : ‘वान वेल्ट वान रोड’
ओवर अर्थात ‘वान वेल्ट वान रोड’ जुन आधुनिक एक्काईसौं शताब्दीमा श्रृजनागरिएको चाईनिज अवधारणा । जसले